Axmad – Page 2 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Aqoonyahan ka hadlay dhibaatada heysata Muslimiinta Turkistaanta bari.(Dhagayso)
Axmad	 Jun 15, 2019 0
Maxamuud Ugaas, waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka dibadiisa, wuxuu waraysi uu siiyay idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan kaga hadlay dhibaatada ay la noolyihiin muslimiinta Turkistaanta bari. Aqoonyahanka ayaa sheegay in…
Al-Shabaab oo la wareegay deegaan katirsan NFD.
Axmad	 Jun 14, 2019 0
Wararka ka imaanaya dhulka NFD ee ay heysato dowladda Kenya ayaa ku waramaya in ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay la wareegeen gacan ku heynta deegaan muhiim ah. Deegaanka Kontonka oo hoostaga magaalada Wajeer ee NFD…
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 11-10-1440
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan. Halkan ka dhagayso War subax 14-06-2019
Doonyo shidaal siday oo lagu weeraray Xeebaha gacanka Cummaan.
Axmad	 Jun 13, 2019 0
Labo doonyo oo waaweyn, islamarkaana ah noocyada shidaalka qaada ayaa lagu weeraray xeebaha gacanka Cummaan, waxaana gaaray waxyeello kala duwan. Doonyahan la weeraray waxay midi katimid xeebta Abuu Dubai ee wadanka Imaaraadka Carabta,…
Taliyaha ciidamada AFRICOM oo booqasho qarsoodi ah ku yimid Muqdisho.
Magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaa booqasho aan horey loo sii shaacin ku yimid taliyaha ciidamada Maraykanka ee qaaradda Africa ninka lagu magacaabo Thomas Waldhauser. Maalintii Talaadada ee aynu soo dhaafnay ayuu…
Gaari ciidamada Kenya Looga gubay Gaarisa.
Qarax xoogan ayaa ciidamada Kenya waxaa lagula eegtay deegaan hoostaga gobolka Gaarisa oo kamid ah dhulka NFD ee ku jira gumeysiga dowladda Kenya. Wuxuu ka dhacay qaraxa inta u dhexeysa Sedax goosa iyo Amuuma oo hoostaga Gaarisa,…
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan. Halkan ka dhagayso War duhur 12-06-2019 lite
Dadka kunool Soomaali-galbeed oo ka cabanaya dhibaatooyin.
Haweenka ku dhaqan gobolka Doollo ayaa si weyn uga cabanaya dhibaatooyin ay ku qabaan ciidamada Itoobiya ee Liyu Boliska. Haweenkan oo qeyb ka ah dadka dibad baxyada ka wada Wardheer oo kamid ah magaalooyinka ugu caansan dhulka…
Taliyihii Police-ka Hiiraan Oo Beledweyne lagu dilay.
Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay dagaal dhexmaray ciidamo kala hoostaga gudoomiyihii xilka laga qaaday ee Yuusuf Dabageed iyo kan uu soo magacaabay Maxamad Cabdi Waare. Iska hor imaadka dhexmaray labada…